Warshadda Iron Iron Casemka Casir - Shiinaha Soo-saareyaasha Iron Iron Iron Enamel Casserole, Bixiyeyaasha
Sharaxaadda Alaabta: JTA22, JTA 24 Waxyaabaha: Kabka loo yaqaan 'Iron Enamel Size': 21.5 * 9 ， 24.5 * 12 Xirmooyin: sanduuqa 1.Lighter oo dhaldhalaal leh oo dhammeystirran ayaa kaamil ku ah karinta iyo u adeegidda. Xoq u adkaysta, u adkaysta wasakhda, aan sunta lahayn, dusha sare ee dhaldhalaalka madow ee dusha sare. 2.Sure-qabsashada, gacan qabasho ballaaran oo gees ah oo loogu talagalay raaxada iyo xasilloonida. 3.Thicker base wuxuu abuuraa xitaa qaybinta kuleylka ka sii badan. 4. Naqshadeynta daboolka leh ee la jeexjeexay waxay fududeysaa kuleylka gudaha ee cuntada qoyan ee qoyan.
Lambarka Shayga KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm oval Casserole 28x21cm 30x23cm Tilmaamo aan xarig lahayn oo bir gacmeedyo iyo xarigyo looxyo leh oo loogu talagalay xakamaynta midabka casaanka midabka casaanka, jaalaha, buluugga, casaanka, madow, dahaarka dahabka leh ee loo yaqaan 'koollada koollada leh ee khafiifka leh 1. Khashmiyaha dhaldhalaalka ah ee waajibaadka -1. Qaybinta kuleylka heer sare ah iyo xajinta 3.Cast kuleylka bir si tartiib ah iyo si simanba 4.Perfect u ah cunto karinta tartiib tartiib Tilmaamaha: bir birqaadka iyo gacanta loop xakamaynta weyn ee dusha muraayadda jilicsan wax jawaab ah kama bixinayso waxyaabaha ay ka kooban tahay Prof ...
Shayga Lambarka KA3006 Wareegga Casserole D: 27CM / 30CM Tilmaamo bir ah oo bir jilicsan iyo gacmo loop ah midab xakameyn weyn, casaan, jaalle, buluug, casaan, madow, koollo koollo leh oo khafiif ah leh. .Cast si kulul u kululeeya si tartiib tartiib ah 4.Perfect oo loogu talagalay qunyar socodka karinta Astaamaha: Qalabka birta birta ah iyo gacanta loop ee kontaroolada Wejiga muraayadda jilicsan wax jawaab ah kama bixin walxaha maadada leh ee birta karka birta ah waxay qabataa kuleylka iyo fogaan ...